Ny Bitsiky Ny Vahoaka Afgàna: Ny Toaka, Ny Vehivavy, Ary Ny Fifamatorana Amin’ny Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2017 16:24 GMT
Onne Parl [En] no manazava amintsika ny antony tsy nahitantsika toaka mihitsy teny an-tsena tamin'ny fararano lasa teo. Hoy ny nosoratan'ilay bilaogera :
Milaza ny heviny mikasika ny andro fankalazana ny fetin'ny Vehivavy, ny 8 martsa, sy ny fomba fiainan'ireo vehivavy teratany Afgàna i Afghan Lord [En].
Nilaza tantara nitovitovy tamin'io momba ny vehivavy Afgàna i Safrang[En]. Hoy izy nanoratra:
Tamin'ny alalan'i Jadi [Persiana], Iraniàna bilaogera, manampahaizana manokana momba ny teknolojian'ny fampitam-baovao, no ahitantsika fa misy vondron'olona teratany Iraniàna izay nandefa antso hanaovana hetsi-panoherana ny zava-drehetra ampizakain'ny governemanta Iraniàna an'ireo Afgàna mpifindra monina. Azo jerena ato ireo sary nandritra izany hetsi-panoherana izany. Mivaky toy izao ny sorabaventy iray « Tsy manam-petra ny maha-olombelona », ny iray indray manao hoe « Rehefa manjaka ny tsy rariny, dia lasa andraikitra ny fanoherana ».